SARCOIDOSISUK नर्स हेल्लिन
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन एक नि: शुल्क र गोपनीय टेलीफोन मद्दत लाइन हो। हामी रोगी र अरू कसैलाई सहयोग गर्न मद्दत गर्छौं जसले सरकोडोसिसद्वारा प्रभावित गर्दछ। सबै कलहरू SarcoidosisUK नर्सहरू द्वारा लिइन्छ - दुवै एनएचएस नर्सहरू हुन् जुन सार्कोडोसिसको व्यक्तिगत र व्यावसायिक अनुभव छ।
Sarcoidosis मरीज र तिनीहरूका परिवारहरूले प्राय: उनीहरूको जीपी, वा समेत विशेषज्ञबाट पर्याप्त जानकारी र समर्थन प्राप्त गर्दैनन्। SarcoidosisUK नर्स हेल्पलाइनले sarcoidosis द्वारा प्रभावित को कुनै पनि प्रदान गर्न को लागी अवस्थित छ कि अतिरिक्त जानकारी र समर्थन को आवश्यक छ।
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन नर्सहरू द्वारा चलाइएको छ जुन अवस्थाको व्यक्तिगत र व्यावसायिक अनुभव छ। यसको अर्थ तिनीहरू सार्कोडोसिसको उच्च ज्ञान र जागरूकता हो र वास्तवमा तपाईं के गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो स्थिति मार्फत कुरा गर्न र सबै प्रश्नहरू सोध्न आवश्यक छ कि तपाईं धेरै समय हुन सक्छ कि चिन्ता गर्न वा तपाईंलाई भ्रमित हुन सक्छ।
SarcoidosisUK को साथ एक कल नर्सहरूले तपाईंलाई केही आश्वासन र के आशा गर्न को एक राम्रो विचार दिनुपर्दछ, विशेष गरी यदि तपाई भर्खरै नै निदान गरिएको छ। तपाइँलाई तपाइँको हेरविचार कसरी सुधार गर्ने बारे सल्लाहहरू दिइन्छ, जस्तै प्रश्नहरू तपाईको अर्को अप्ठ्यारो सोध्न वा थप जानकारी हेर्नको लागि प्रश्नहरू।
साथीहरू, परिवार र हेरचाहकर्ता सहित sarcoidosis द्वारा प्रभावित, जो कोही नोस मद्दतलाइनसँग कल अनुसूचित गर्न स्वागत छ।
कल अनुसूचित गर्नको लागि, तलको बटनमा क्लिक गर्नुहोस् र हामीलाई कसरी प्रभाव पार्ने सरकोडोसिसलाई थाहा दिनुहोस्। हामी4दिन भित्र सुविधाजनक समयमा तपाईंलाई कल गर्न लक्ष्य गर्नेछौं।
सरकोडोसिसबाट कलको अनुसूचित गर्नुहोस् न्युज मद्दतलाइन अब
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन प्रतिक्रिया:
"मलाई सरकोडोसिस यूके मद्दतलाइनको साथमा राम्रो अनुभव भएको थियो र सबैभन्दा सुन्दर महिलासँग कुरा गर्नुभयो। मलाई लाग्यो कि म सजिलै संग कुरा गर्न सक्छु र मैले2बर्ष मा पहिलो पटक महसुस गरेको थिएँ कि कसैले मलाई सुनेका थिए। धेरै सहयोगी र हेरचाह गर्ने। "
"मलाई लाग्यो जस्तो लाग्यो कि मलाई बदल्न नसक्ने कारण किनकि सरकोडोसिसको पीडामा धेरै कम जागरूकता र समर्थन छ - यो अवस्थाको साथ जीवनलाई बुझ्ने व्यक्तिसँग बोल्न धेरै उपयोगी थियो साथै व्यावसायिक विशेषज्ञता। धन्यवाद"
"मद्दतलाइन ठूलो थियो। त्यहाँ इन्टरनेट बाहेक धेरै मद्दत वा जानकारी छैन, त्यसैले कसैलाई बोल्ने प्रश्नहरू जवाफ दिन सक्दछन् र धन्यवाद, धन्यवाद। "
"यस अवस्थाको साथ तपाईं एक्लै यस्तो दुर्लभ अवस्थाको रूपमा महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। यो केहि पनि कुरा गर्न को लागी यति सुन्दर थियो कि एउटै परिस्थितिको अनुभव गर्ने र बुझ्नु भयो कि तपाईलाई कस्तो लाग्यो। उनले मेरो सबै प्रश्नहरूको जवाफ दिए! धेरै ठूलो धन्यवाद !!! "
"नर्स अद्भुत थियो, उनले मलाई सजिलै सुने र बस सुन्नुभयो र मेरो सबै चिन्ताहरू जवाफ दिए। हामी केहि समय को लागि कल मा थिए, म अगाडी जाँदै थिए, र उनले मलाई कुरा गरौं। बस मलाई के चाहिन्छ - धन्यवाद! "
SarcoidosisUK नर्स मद्दतलाइन कल
कलरहरूले मद्दतलाइनलाई 'उत्कृष्ट' वा 'सुन्दर राम्रो' को रूपमा मूल्याङ्कन गर्छ
औसत कलब्याक समय